Author Topic: Jyoti Magar (ज्योति मगर) Singer and model (Read 64732 times)
« Reply #20 on: January 28, 2016, 05:35:52 AM »
मंसिर १८, २०७२-
‘छोटो–छोटो सारी मेरो हातमा सुनको बाला
कुरा काट्ने मारिरहन्छन् मेरो आफ्नै चाला’
तीज गीत ढाडे बिरालोमा अभिनय गरेपश्चात् सिर्जित विवादलाई प्रतिउत्तर दिन गायिका ज्योति मगरले यो तीज गीत गाइन् । उक्त गीतले पनि दर्शक–श्रोताको उल्लेख्य माया पायो । कि रेखाको चल्छ, कि देखाको चल्छ’ ढाडे बिरालोको म्युजिक भिडियोभित्रै ज्योतिले बोलेको एउटा संवाद थियो । जुन फेमस डायलग बन्यो ।
युट्युबमा १९ लाखपटक हेरिएको उक्त म्युजिक भिडियो हेर्ने कतिपय भने ज्योतिमाथि खनिन थाले । भिडियो अश्लील भएको भन्दै ज्योतिको आलोचना भयो । अपेक्षाभन्दा बढी चर्चा पाएको उक्त गीतको अपजसजति सबै अभिनय गर्ने कलाकार ज्योतिमाथि थोपरियो । यहाँसम्म कि राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानले मुख्य गल्ती ज्योतिको मान्दै उनलाई सचेत गराउन पत्र नै लेख्यो ।
ढाडे बिरालो गीत सार्वजनिक भएपछि आलोचनाकै बीचमा अमेरिका पलायन भएका गायक रामप्रसाद खनालले फेसबुकमा स्टाटस लेखिदिए– ‘चर्चा कमाउनकै लागि हो भने, देखाएकै भरमा हिट हुने भूत चढेको हो भने, ‘नीलो चलचित्र’ खेल्दा चर्चित हुन झन् छिटो होला बरु त्यतै लाग्छ्यौ कि नानी ?’ लोकगीत र दोहोरी गीत पवित्र क्षेत्र भएकाले यसलाई दूषित नबनाउन खनालले चेतावनी दिएका थिए । खनालले भनेका थिए– ‘तिम्रो नग्नता र उत्ताउलोपनले यो पवित्र क्षेत्रलाई दूषित पार्ने धृष्टता नगर ।’ खनालको यो भनाइलाई पहिलो पोस्ट डटकममार्फत ज्योतिले तोडको जवाफ फर्काइन्– ‘उमेरका हिसाबले म उहाँकी छोरीजस्ती मान्छे हुँ । छोरीजस्ती मान्छेलाई ‘नीलो चलचित्र’ खेल भनेर सुझाव दिनेको औकात के हो भन्ने कुरा हो । जहाँसम्म खेल्ने कुरा रह्यो, नीलो चलचित्रका बारेमा उहाँलाई थाहा रहेछ, बनाउनुस्, खेल्नुस्, त्यो चलचित्रमा आफ्नी छोरीलाई पनि खेलाउनुहोस्, त्यसपछि म पनि खेलुँला ।’
पछिल्लो २ वर्षयता ज्योति नेपाली मनोरञ्जनको क्षेत्रमा चर्चामा छिन् । उनले लगाउने छोटा पहिरन र कामुक शैलीको अभिनय निरन्तर चर्चामा रहन्छन् । फिटिङ पहिरनमा उनका उन्नत स्तन सधैं बाहिर निस्कलाझैं गरेर चिहाइरहेका हुन्छन् । चर्चासँगै उनी विवादमा पनि उत्तिकै तानिन्छिन् । पछिल्लो समयमा त उनी विवादकी महारानी (कन्ट्रोभर्सी क्वीन) नै भएकी छिन् । उनको ग्ल्यामरस छविको दायरा बढेको कुरा विभिन्न माध्यमका समाचारमा उनले पाएको स्थानबाट प्रस्ट हुन्छ ।
कुनै सुन्दर वस्तु अवलोकन गर्नु मानिसको अधिकार नै हो नि, आफ्नो शरीरको सबैभन्दा आकर्षक पक्ष स्तन नै भएको उनी बताउँछिन् । ज्योति भन्छिन्– मलाई पनि मेरा स्तन सुन्दर लाग्छन्, मानिसहरू शल्यक्रिया गरेर स्तनलाई आकर्षक बनाउँछन् भन्ने सुनेकी छु, तर मैले प्राकृतिक रूपमै कसिलो स्तन पाएकी छु ।’
त्यसो त सबै कार्यक्रममा उनी छोटा पहिरनमै मात्र देखिन्छिन् भन्ने पनि होइन । ओमान, बहराइन, हङकङ आदिका कार्यक्रममा उनी शरीर ढाकिने गरी परम्परागत गुन्यू चोली र गाउनमा पनि प्रस्तुत भएको बताउँछिन् । बोल्ड एन्ड सेक्सी भएपछि आफ्नो सांगीतिक व्यस्तता ह्वात्तै बढेको कुरा उनी स्वीकार गर्न चाहन्नन् । ६ वर्षयता निरन्तर एउटै गतिमा म सांगीतिक कार्यक्रममा सहभागी भैरहेकी छु, तर हालैका दिनमा विभिन्न चर्चा–परिचर्चाले पहिलेभन्दा डिमान्ड बढेको महसुस हुन थालेको छ, ज्योति भन्छिन्– पछिल्ला १ वर्षमा कार्यक्रमको संख्या बढेको छ ।
कतिपय कार्यक्रममा दर्शकहरू ज्योतिलाई हेर्न वा एकपटक छुनसम्म पाउने आशामा हुन्छन् । टुँडिखेलको होलीको कार्यक्रममा दर्शकहरूको भीडले घेरेर माया दर्साएको क्षण उनका निम्ति सधैं स्मरणमा रहनेछ । त्यो दिन उनले आफू सेलिब्रेटी भएको पहिलो पटक महसुस गरेको उनले बताइन् । त्यस्तै, कोटेश्वरको एक ओपन कन्सर्टमा भने भीडभाडमा स्कर्टिङ गर्दै लैजाँदा एक दर्शकले च्याप्पै स्तन समाएको घटना पनि उनी सम्झन्छिन् । ज्योतिले कार्यक्रमहरूमा किस गर्न खोज्ने, ओठ टोक्न खोज्ने थुप्रै दर्शकको सामना गरिसकेकी छिन् । ‘तर म त्यस्तो बेला भाग्न सिपालु छु,’ ज्योति भन्छिन्– ‘यसले के गर्न खोज्यो भन्ने बुझिहाल्छु, उसले हेर्दा हेर्दै म त्यहाँबाट अलप भैसकेकी हुन्छु ।’
नेपाली लोकगीत र संस्कृतिलाई राम्रोसँग बुझेरै आफूले यस्तो छवि निर्माण गरेको दाबी उनको छ । लोकगीतलाई मर्यादित बनाउनुपर्छ भन्नेहरू आफैंले त्यसमा विकृति भित्र्याएका हुन्, ज्योति भन्छिन्– ‘उनीहरू भित्रभित्रै यो क्षेत्रको बदनामीमा सम्लग्न छन्, अनि गालीचाहिँ ज्योति मगरलाई गर्छन् । मौलिक लोकगीतहरूको इतिहास हेर्दा त्यसमा सेक्सीपन व्यापक छ ।’
दोहोरी गायनमा द्विअर्थी शब्द प्रयोग गर्ने ज्योति नियमित संवादमा पनि त्यस्ता शब्द प्रयोग गर्न खप्पिस छिन् । ज्योतिले आफ्नै जीवनसँग मेल खाने गीत पनि गाइसकेकी छिन् । पशुपति शर्माका साथमा गाएको रोइला भाकामा पशुपतिले ‘दोहोरी गाउने, नांगै हिँड्ने यही ज्योति मगर होइन, नत्र गीतै नगाए दोहोरी गाउने भए लामो लुगा लगाए’ भन्दा ज्योतिले जवाफ फर्काएकी छिन्– ‘यही पशुपति आएर, तीजका गीत बिगार्‍यो, रत्यौली गीत गाएर, यही पशुपति आएर’ । यो गीतलाई युट्युबमा १३ लाख पटक हेरिएको छ । उनी आफ्नो अहिलेको परिचयप्रति कुनै एंगलबाट पनि लघुताभास गर्दिनन् भन्ने कुरा यो गीतका अन्य शब्दमा आफैंमाथि भएको प्रहारलाई सहज रूपमा लिनुबाट पुष्टि हुन्छ । ज्योति भन्छिन्– ‘मैले मौलिक परिचय खोजें, त्यसमा म सन्तुष्ट छु भने अरूले टाउको दुखाउनु आवश्यक छैन । हट एन्ड सेक्सी परिचय नै यो डल्ली मगर्नीलाई सुहाउँदो छ ।’
मेरो स्तनको मूल्य कति हो ?
सुरुवातमा नेपाल टेलिभिजनमा प्रसारण हुने टि–टाइम शीर्षकको कार्यक्रमलाई दिएको अन्तर्वार्ता प्रतिबन्धित भएपछि ज्योतिको कन्ट्रोभर्सी यात्रा प्रारम्भ भएको हो । उक्त अन्तर्वार्ता हुनुभन्दा केही अघि मात्र ‘पिरतीमा दम छ’ शीर्षकको उनको गीतको प्रोमो नेपाल टेलिभिजनमा बज्न थालेको थियो । तीजको पूर्वसन्ध्यामा उनले उक्त अन्तर्वार्ता दिएकी थिइन् । गुन्यूचोली घलेक र पटुकीमा सजिएर रेकर्डेड अन्तर्वार्ता दिएकी ज्योतिले पछि एउटा समाचारमार्फत थाहा पाइन् उक्त अन्तर्वार्ता सेन्सरमा पर्‍यो भन्ने कुरा । चोली लगाए पनि क्लिभेज प्रस्ट देखिएकाले राष्ट्रिय च्यानलले उक्त अन्तर्वार्ता प्रसारण नगर्ने निर्णय लिएको थियो ।
स्तन सम्हाल्न नसक्दा
हिमालय टेलिभिजनमा प्रसारण हुने जोगिन्दर पानवालाको अन्तर्वार्तामा पनि उही कुरा दोहोरियो । जोगिन्दर बोले प्रणामजी शीर्षकको उक्त कार्यक्रममा ज्योतिको स्तन आधा देखिएको भनेर कार्यक्रम प्रसारणमा प्रतिबन्ध लगाइयो । ‘ज्योतिले स्तन सम्हाल्न नसक्दा’ शीर्षकमा हिमालय टिभीले पनि अन्तर्वार्ता प्रसारण रोकेको भन्दै अनलाइनहरूमा थुप्रै समाचार आए । नेपाल टेलिभिजनको कार्यक्रम प्रतिबन्धमा परेको हल्ला चलेकै भरमा हिमालय टेलिभिजनको उक्त कार्यक्रम सिकार भएको ज्योतिको भनाइ छ । माउन्टेन टेलिभिजनले पनि उनको अन्तर्वार्ता प्रसारणमा रोक लगाएको समाचार आएका थिए ।
पिरतीमा दम छ
ज्योतिले गाएका हिट नम्बरमध्ये एक हो— पिरतीमा दम छ । यो गीतको म्युजिक भिडियोमा ज्योतिले सेन्सेसनल दृश्यका साथमा उत्तेजक प्रस्तुति दिएकी छिन् । युट्युबमा यो भिडियोलाई १० लाख पटक हेरिएको छ । सानो चोली र छोटो स्कर्टमा नाचेकी ज्योतिले टङ किस दिएको दृश्य पृष्ठभूमिमा देखिन्छ ।
वास्तवमा डेनमार्कको कन्सर्टले रिभोलुसन ल्याएको थियो । उक्त कन्सर्टलगत्तै ज्योति सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन न्युज पोर्टलमा भाइरल बनेकी थिइन् । आधा स्तन देखिने गरी आफूलाई प्रस्तुत गरेकी ज्योतिले उक्त कन्सर्टमा अपिलिङ प्रिजेन्टेसन दिएकी थिइन् । उनको सेक्सी पर्फमेन्सले सबैतिरको वातावरण एकाएक गर्मायो । उक्त कार्यक्रमको फुटेज मात्र युट्युबमा ३ लाख पटक हेरिएको छ । युट्युबमा असित प्रधान नामका एक दर्शकले हलिउडलाई टक्कर दिने नेपाली पर्फमर भनेर ज्योतिको प्रशंसा गरेका छन् । उनी स्टेजमा चढ्नेबित्तिकै आफूलाई इन्टरटेनरका रूपमा प्रस्तुत गर्छिन् । रमाइला गीत गाउँदै नाची छोटा र छरिता पहिरन नै सजिला हुन्छन्, अप्ठ्यारा पहिरन लगाएर नाच्न सम्भव नहुने उनको तर्क छ । अन्य गायिकाले जस्तो डिजाइनर ड्रेस लगाएर नाच्न सक्दिनँ, त्यो ड्ेरस लगाएपछि हाइहिल लगाउनुपर्‍यो, फ्ल्याट चप्पल लगाउन मिल्दैन, नाच्दै गाउन मलाई फ्ल्याट चप्पल चाहिन्छ, ज्योति भन्छिन्– ‘लाइट, म्युजिक, साउन्ड, दर्शक र सांस्कृतिक वातावरणले ममा एक प्रकारको तरंग सिर्जना गर्छ, स्टेजमा चढेपछि त झन् आफूलाई नै बिर्सिएर दर्शकलाई मनोरञ्जन गराउन उद्यत् हुन्छु ।’
ज्योतिको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने जापानको कार्यक्रम अत्यधिक सफल भएको थियो, तर समाचारहरूमा भने उनको प्रस्तुति अति उत्तेजक हुँदै गएको टिप्पणी आइरहेका थिए । एकातर्फको थाई मज्जाले देखिने लेहेंगा–चोलीमा उनले जापानको कन्सर्टमा सहभागिता जनाएकी थिइन् । उक्त सांस्कृतिक कार्यक्रममा एक युवाले ज्योतिको स्तन समाउन खोजेको जस्तो तस्बिर भाइरल भएको थियो । ‘म अघि सरेर गीत गाइरहेका बेला नजिक आउन खोज्ने एक युवाको हात अगाडि आएकै बेला क्यामेराले क्लिक गरेछ,’ ज्योति भन्छिन्– ‘खासमा ती युवाले स्तन समाउन खोजेका होइनन्, तस्बिरमा चाहिँ त्यस्तो देखियो ।’ एक व्यक्तिले ज्योतिको जापानको प्रस्तुति लोकदोहोरी क्षेत्रलाई गतिलो झापड भएको भनेपछि राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानमा रहेका व्यक्तिहरूले ज्योतिलाई लक्षित गर्दै कारवाहीका निम्ती विभिन्न स्टाटस लेखे । तर प्रतिष्ठानको सदस्यता नै नलिएकी ज्योतिले त्यस्ता कुरामा कानमा तेल हालिदिइन् ।
दुबईको कार्यक्रम प्रारम्भ हुनुभन्दा केही अघि नै हाउसफुल भैसकेको थियो । दर्शक धेरै तर हल सानो भएकाले उक्त कार्यक्रममा सबै दर्शकले सहभागिता जनाउन सकेनन् । उक्त कन्सर्टका क्रममा दर्शकले ज्योतिलाई हेर्न कुर्सी भाँचेको समाचारहरू आए । ज्योतिको गरमागरम प्रस्तुति हेर्न पुगेका युवाहरू हलको पछिल्लो भागमा उभिएर उनको कामुक हाउभाउसहितको गायनमा रमाइरहेका थिए । ‘एकातर्फ सानो हलमा धेरै मान्छे अर्कातर्फ स्टेज पनि होचो भएकाले पछाडि बस्नेहरूले राम्रोसँग हेर्न पाउनुभएनछ,’ ज्योति भन्छिन्– ‘त्यही क्रममा दर्शकहरू कुर्सीमा चढ्न थाले, अनि कुर्सी भाँचिए, लगातार कुर्सी भाँचिएपछि हल म्यानेजरले कुर्सीमा नचढ्न आग्रह गर्दा पनि चढ्ने क्रम नरोकिए विवाद बढेछ ।’ ज्योतिको जोसिलो प्रस्तुति नै युवाहरू आवेशमा आउने र कुर्सी भाँचिने कारण मानियो ।
धनगढीमा ब्याड एक्सपिरियन्स
ज्योतिले प्रस्तुति दिने भनेपछि युवाहरू जोस्सिनु त स्वभाविक हो, तर धनगढी महोत्सवमा भने केही फरक दृश्य देखियो । उनले स्टेजमा प्रस्तुति दिने क्रममा केही युवा ठेलमठेल गर्दै अगाडि आए, अगाडि महिला र वृद्धहरू बसेका थिए । कन्डम फुलाएर आएका ती युवाहरू एकदमै जोस्सिएका थिए । ३०–४० हजार दर्शक भएको महोत्सवको वातावरणलाई नै बिथोल्ने गरी उनीहरू आक्रामक देखिए । ज्योतिलाई एकाएक आयोजकले स्टेज छोड्न दबाब दिए । त्यसपछि स्टेज सम्हाल्न गायक पशुपति शर्मा आए । एकाएक बन्द गर भन्ने आवाजहरू आए, त्यसपछि फेरि ड्डपछि आउने भन्दै उनी बिदा भइन् । ‘धनगढीको उक्त कन्सर्ट मेरा निम्ति ब्याड एक्सपिरियन्स थियो,’ उनले भनिन्– ‘केही दर्शक रमाइरहेकै बेला केही दर्शक आवश्यकभन्दा बढी आवेशमा आउँदा अरू गीत गाउन पाइनँ ।’ त्यसो त धनगढीजस्तै बर्दियामा भएको कार्यक्रममा ज्योतिको प्रस्तुति हुने भनेपछि आयोजकले सुरक्षाकर्मी नै थप्नुपरेको थियो । गीत गाउँदा–गाउँदै स्टेजबाट झरेर दर्शक नजिक पुग्दा आवेशमा आएका दर्शकहरू उनलाई छुन अघि बढे । त्यही क्रममा प्रहरीले लाठी चार्ज गर्नुपर्‍यो जसमा एक जनाको टाउको नै फुट्यो ।
सबैभन्दा चर्चित कन्ट्रोभर्सी डाढे बिरालो सार्वजनिक भएपछि सिर्जना भएको थियो, जसमा उनको रातो कट्टु प्रस्ट देखिएको र स्तन देखाउने हिसाबले आफूलाई प्रस्तुत गरेको आरोप लाग्यो । गीतको शब्द अश्लील भए पनि ज्योतिको अभिनय अझ अश्लील र कामुक भएको भनियो । त्यसैले उक्त गीतमाथि नै प्रतिबन्ध लगाउने अभियान चल्यो । यद्यपि ढाडे बिरालो युट्युबमार्फत चर्चित भैसकेको थियो । ‘गीत लेख्ने, गाउने, भिडियो बनाउने मध्येलाई केही भनेनन्, सबै मतिरै खनिए,’ ज्योतिले भनिन्– ‘त्यतिले मात्र नभएर हँुदै नभएका स्क्यान्डल सिर्जना गरेर मलाई बदनाम गर्न खोजियो ।’
सामाजिक सञ्जालमा अश्लीलता
ज्योति मगरका सेक्सी लुक्स सामाजिक सञ्जालमा निरन्तर पोस्ट भैरहेका हुन्छन् । उनको व्यक्तिगत फेसबुक एकाउन्टबाहेक अर्को फ्यान पेज पनि छ, जसमा ८५ हजार दर्शकले लाइक गरेका छन् । ज्योति आफैं पनि आफ्ना हट एन्ड सिजलिङ तस्बिर फेसबुकमा पोस्ट गर्छिन् । उनका विभिन्न कार्यक्रमका तस्बिर पनि त्यहाँ ट्याग हुन्छन् । ती कामोत्तेजक तस्बिरले भ्युअर्सहरूमा उत्तेजना नै सिर्जना गर्छन् । त्यसमा आउने अधिकांश कमेन्ट पनि अश्लील हुन्छन् । त्यहाँ प्राप्त प्रतिक्रियाप्रति ज्योतिको खासै चासो देखिँदैन ।
‘रातो साडी रातै छ कलर, एक रात सुत्न १ हजार डलर’ शीर्षकको तीज गीत छायांकन गर्ने क्रममा पार्टी प्यालेसमा मेकअप गरेर तयार भएकी ज्योतिलाई स्थानीय महिलाहरूले कुटेको समाचार एकाएक भाइरल भयो । जबकि उनी त्यो दिनभर कोटेश्वरमा थिइन् । अहिले तपाईंलाई कस्तो छ, नराम्रो घटना भएछ है भनेर लगातार फोन आएपछि उनले छक्क पर्दै के भएको छ र ? भन्दै गइन् । केही क्षणमै वास्तविकता अगाडि आइहाल्यो । ‘म त छक्कै परें, अघिल्लो दिनको बेलुकासम्म पनि बालाजुको बाइसधारामै मेरो तीज गीतको भिडियो छायांकन हुने सल्लाह थियो, अन्तिम अवस्थामा प्राविधिक कुरा नमिलेर छायांकन स्थगित भएको थियो,’ ज्योति भन्छिन्– ‘मलाई बदनाम गर्ने उद्देश्यले नजिकका मानिसले नै हल्ला फैलाएका रहेछन् ।
तीजकै समयमा हिमालय टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने धमलाको हमला कार्यक्रममा ऋषि धमलाले गरेका उत्तेजक प्रश्नको सटीक र बेवाक उत्तर दिएर उनी थप चर्चामा आइन् । उक्त कार्यक्रममा ज्योतिलाई धमलाले बिकिनीमा देख्न चाहेको भन्ने जिज्ञासामा आफ्नो फिगर बिकिनीका लागि फिट नभएको बताइन् । डल्ली र मोटी छु, त्यसैले पनि बिकिनीमा देखिन चाहन्न, उनले भनेकी छिन् । छोटा पहिरन लगाउँदा केटाहरूलाई गाह्रो हुँदैन भन्ने प्रश्नमा केटाहरूलाई चाहिँ होइन, बरु बूढाहरूलाई गाह्रो हुन सक्ने ज्योतिको जवाफ थियो । धमलाले तपार्इं भर्जिन हो ? भनेर सोधेपछि ज्योतिले उल्टै प्रतिप्रश्न गरिन्, के तपाईंचाहिँ भर्जिन हो ? त्यसपछि प्रश्नकर्ता धमला आफैं अक्क न बक्क भए । ज्योति मगरले धेरै नै देखाई भन्नेहरूलाई के भन्नुहुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा कि त ज्योति मगरलाई हेर्दै नहेर्नु हेरेर आनन्द लिएपछि किन गाली गर्नु ? –उनको उत्तर थियो । धमलाको हमला भनिए पनि ज्योति मगर उल्टै धमलामाथि नै हमला गर्ने शैलीमा प्रस्तुत भएपछि यो कार्यक्रमले निकै चर्चा पाएको थियो ।
अनलाइन खबरको फोटोसुट
ज्योति मगरले हट फोटोसेसन गर्ने क्रममा अनलाइन खबर डटकमका लागि खिचाएको तस्बिरले उत्तिकै चर्चा पायो । शरीर झुकाएर उनले आफ्ना उन्नत स्तन देखाएकी थिइन् । कालो सर्ट, कालै हाफपाइन्ट लगाएर विभिन्न पोजमा खिचिएको उक्त फोटोसुटमा स्तनलाई नै फोकस गरिएको छ । श्रीधर पौडेलले खिचेका ती तस्बिर सार्वजनिक हुनेबित्तिकै एकाएक भाइरल बन्न पुगे । यसैगरी गत असारमा धान रोपाइँको उनको फोटोसेसन पनि वक्ष प्रदर्शनकै कारण चर्चामा आयो ।
गीत–संगीतप्रतिको ज्योतिको मोह सानैदेखिको हो । ग्रामीण क्षेत्रमा हुने सांस्कृतिक कार्यक्रममा गीत गाउनु र नाच्नु उनको पहिलो प्राथमिकतामा पर्थे । कुनै समय एमाले निकट जनसांस्कृतिक मञ्चको कलाकारका रूपमा ‘आमा दिदी–बहिनी हो, कति बस्छौ दासी भै सुखको सधैं प्यासी बनेर’ गाउँदै हिँड्ने ज्योति अहिले आएर ‘पिरतीमा दम छ’ की गायिका बन्न पुगेकी छिन् । यसबीच ज्योतिको जीवनमा ३ सय ६० डिग्रीको परिवर्तन आइसकेको उनको यात्राले प्रस्ट पार्छ । रोल्पाको नुवागाउँस्थित सामान्य परिवारमा जन्मिएकी ज्योति दाङबाट एसएलसी दिएर संगीतमा करियर खोज्ने क्रममा ०६३ सालमा काठमाडौं आएकी थिइन् । काठमाडौं आएर पनि जनसांस्कृतिक मञ्चकै कलाकारका रूपमा उनी जेबी टुहुरेजस्ता कलाकारको प्रस्तुतिमा सहयोगी गायिकाका रूपमा प्रस्तुत हुन्थिन् । मञ्चकै देउसी–भैलोमा सहभागिता जनाउँथिन् । काठमाडौं आएकै दिन उनी नातेदारको सहयोगमा एक दोहोरी साँझमा गीत गाउन पुगिसकेकी थिइन् । दोहोरी साँझको उनको यात्राले उनलाई आफ्नै गीत–संगीत सिर्जनामा सक्रिय रहन हुटहुटी जगायो । दोहोरी साँझमा टिपिकल ढंगले बसेर गाउनुको सट्टा नाच्दै गीत गाइन्, त्यसले उनलाई स्टेज पर्फमर आर्टिस्ट बन्न मद्दत गर्‍यो । गायिकाको परिचय बनाउन भने उनले पापड नै बेल्नुपर्‍यो । नयाँ कलाकारलाई कम्पनीले विश्वास गर्दैनथे । काठमाडौंको संघर्षपूर्ण जीवनको सुरुवातमा उनले मोडलिङदेखि रेडियो नाटक, सडक नाटक, टेलिश्रृंखला र चलचित्रमा अभिनयजस्ता काम पनि गरिन् । कतिपय जिंगलमा स्वर दिएँ, कोरसमा काम गरें, ज्योतिले भनिन्– ‘कला र अभिनय क्षेत्रका धेरै विधामा काम गरें, त्यसले तत्कालको गर्जो टाथ्र्यो ।’
२०६५ सालमा रेशम सापकोटाले सार्वजनिक गरेको गाईजात्रा प्रहसनको एल्बममा समाविष्ट कमेडी गीतमा छोटो पहिरनमै अभिनय गरेको उनी बताउँछिन् । ज्योति भन्छिन्– ‘सुरुवातदेखि नै सेक्सी टाइपको गीत तयार पार्ने र त्यसमा कामुक शैलीमै अभिनय गर्ने इच्छा थियो, जुन पिरतीमा दम छ गरेपछि मात्र पूरा भयो ।’ आफ्ना सबैजसो गीतमा सेक्सी शब्द, सेक्सी ड्रेस र सेक्सी प्रिजेन्टेसन भएको ज्योति बताउँछिन् । मेरो गीत–संगीत रुचाउने लाखौं श्रोता र दर्शक हुनुले पनि यस्तो शैलीको माग छ भन्ने पुष्टि हुन्छ, –उनले भनिन् ।
सांगीतिक यात्राको सुरुवाती क्रममा टुबोर्ग राष्ट्रिय दोहोरी गीत प्रतियोगितामा बेस्ट सिंगरको उपाधि जितेपछि उनी एल्बम निकाल्ने बाटोमा अग्रसर भइन् । सुरुमा मन किन टाढा भो गीत रेकर्ड गरिन् तर म्युजिक कम्पनी नै बन्द भएपछि पहिलो प्रयास असफल भयो । अर्को गीत मायासँगले आंशिक चर्चा पायो । प्रत्यक्ष दोहोरी गायनमा सिपालु भएकाले उनले विदेशका कार्यक्रम भने पाइहालिन् ।
मैले माफी मागेको हो
ढाडे बिरालो गीतको निर्देशन गर्ने अनि पछि माफी माग्ने, यो त विरोधाभाष भयो नि होइन ?
हो, मैले माफी मागेको हो । राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानको केन्द्रीय सदस्य भएकाले मैले यो गीत निर्देशन गर्न नहुने थियो जस्तो लाग्यो, त्यसैले माफी मागे ।
यो गीतले आवश्यकताभन्दा बढी चर्चा पाएको हो ?
त्यो पनि हो । यस्तै किसिमका अरू थुप्रै गीत बजारमा आएका थिए र छन् पनि । अझ बढी ग्लामरस भिडियो पनि छन् ।
निर्देशकका रूपमा तपार्इंलाई दोषी देख्नुको सट्टा ज्योतिलाई दोषी बनाइयो नि ?
मैले माथि नै भनिसकें, निर्देशकका हिसाबले ढाडे बिरालो प्रकरणको सम्पूर्ण जिम्मेवारी म लिन तयार छु । म आफैं समस्यामा परेको थिएँ । मैले त्यो ड्रेस हुँदैन भन्नुपथ्र्यो । भिडियो खिच्ने क्रममा क्लोज सट लिनैपर्ने हुन्छ, क्लोज लिँदा अझ बढी एक्सपोज भयो । पछि मैले राम्रोसँग सुन्दा गीत पनि उत्तिकै उच्छृंखल रहेछ भन्ने बुझें । यो गीतले मलाई राम्रोसँग पाठ सिकाएको छ ।
अनि प्रतिष्ठानले पूर्वाग्रही ढंगले ज्योतिलाई मात्र कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुलाई के भन्नुहुन्छ ?
प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गर्ने भएपछि सबैलाई ‘मेन्सन’ गर्नुपथ्र्यो । ज्योतिलाई मात्र लेखिँदा पक्षपात भएको हो कि जस्तो लाग्छ । मलाई फोन गरेर स्पष्टीकरण सोधियो, मैले गल्ती भयो भनेर माफी मागे । सम्भवत: त्यही भएर मलाई पत्रमा सम्बोधन नगरिएको होला तर टिमको नेतृत्वकर्ताका हिसाबले मलाई र गीत सिर्जनामा संलग्न गीतकार, गायक–गायिका सबैलाई प्रतिष्ठानले सम्बोधन गर्नुपथ्र्यो ।
मलाई उनको पक्षमा बोल्न आवश्यक लाग्यो
सुवास रेग्मी, सञ्चालक,
सामाजिक सञ्जालमा ज्योति मगरलाई खुबै सपोर्ट गर्नुहुन्छ नि ?
एउटा कलाकारले आफू सफल हुन धेरै नै संघर्ष गरेको हुन्छ । ज्योतिलाई म लामो समयदेखि चिन्छु । उनले प्रारम्भिक समयमा मौलिक लोकसंगीत सिर्जना र लामो गुन्यूचोली लगाएर अभिनय गरेकी हुन् । समय कालखण्डमा उनले आफ्नो प्रस्तुति, सिर्जना र पहिरनमा फरकपन खोजिन् । स्रष्टालाई अनावश्यक ढंगले केही व्यक्ति र संस्थाले खेद्न थालेपछि मलाई उनको पक्षमा बोल्न आवश्यक लाग्यो ।
पछिल्लो समयमा त उनी मौलिक लोकसंस्कृति झल्काउने गीत गाइरहेकी छिन् त ?
लोकगीत र लोकदोहोरी गीतसंगीतको संरक्षण गर्छौं भन्नेहरूले स्थापना गरेका संघसंस्थामा बसेका पदाधिकारीहरूले नै विकृतिको बीजारोपण गरेका हुन् । लोकदोहोरी साँझको नाममा लाजमर्दो भट्टी पसल सञ्चालन गर्नेहरू अहिले ज्योति मगरको लामो कपडा खोजिरहेका छन् । वास्तवमा उनीहरूले यो क्षेत्रलाई बदनाम गरेका हुन् । अहिले ज्योतिले मौलिक लोकसंस्कृति झल्काउने गीत गाएकी छु भनेर स्वंय पनि भन्दिनन् । उनी आफूलाई खेद्नेहरूलाई गतिलो जवाफ फर्काउने काम गरिरहेकी छिन् ।
ढाडे बिरालोको प्रसंगमा ज्योतिलाई चेतावनीपत्र दिनुलाई के भन्नुहुन्छ ?
ढाडे बिरालोका निर्देशक शंकर बिसी स्वयं राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ । उक्त गीतका गायक–गायिका पनि प्रतिष्ठानका सदस्य छन्, तर अभिनय मात्र गरेकी ज्योतिलाई कारबाहीस्वरुप पत्र लेखियो । उक्त गीत आफैंमा विकृत होला तर ज्योतिलाई मात्र लक्षित गरेर पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरियो ।
« Reply #21 on: January 28, 2016, 05:36:22 AM »
ज्योति मगर — गाएर हिट कि देखाएर ?
जामा लाउँदा छोटो भयो, सारी लाउँदा सुहाएन
उखरमाउलो बैंस छोप्ने चिजै भएन ।
दोहोरो अर्थ लाग्ने यो लोकगीत प्रकाश कटवाल र श्रीदेवी देवकोटाले गाएका हुन् । जस–अपजसको पहिलो भागीदार हुनुपर्ने पनि उनीहरू नै हो । तर, भिडियोमा छोटा कपडा लगाएर कम्मर मर्काउने ज्योति मगर चर्चा र विवादको केन्द्रमा रहिन् । सामाजिक सञ्जालदेखि चिया पसलसम्म ज्योतिका बारेमा नानाथरी टिप्पणी सुनिन्छन् । दुई साताको बीचमा युट्युबमा गीत १० लाखपटक हेरिसकिएको छ, जसले सुपरहिट भएको प्रमाणित गर्छ तर ज्योति भने चौतर्फी आलोचनाको सिकार भएकी छन् ।
आलोचना कुन हदसम्म भएको छ भने राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानले शब्द र भिडियो अत्यधिक अश्लील र नेपाली समाजमा अपाच्य भएको ठहर नै गरेको छ । २९ साउनमा चितवनमा कार्यक्रम नै आयोजना गरेर प्रतिष्ठानका अध्यक्ष अम्मर विरही गुरुङले सरकारसँग तत्काल यो गीतको प्रसारण रोक्न आग्रह नै गरे ।
अमेरिकामा बस्ने लोकगायक रामप्रसाद खनाल त ज्योतिको मामलामा अझ क्रूर देखिए । लोकगीत पवित्र क्षेत्र भएकाले आफ्नो नग्नता र उत्ताउलोपनले दूषित पार्ने धृष्टता नगर्न उनले फेसबुकमार्फत आग्रह गरेका छन् । उनले लेखे, ‘देखाएकै भरमा हिट हुने भूत चढेको हो भने तिमीलाई ‘नीला फिल्म’ खेलेर चर्चित हुन झन् छिटो होला ।’ यस्ता चर्काे आलोचना खेप्नु परिरहेका बेला २७ साउनमा ज्योतिले अर्को तनाव झेल्नु पर्‍यो, जब बालाजुमा गीत सुटिङ गर्दा–गर्दै स्थानीय महिलाले उनलाई पिटेको हल्ला भाइरल बन्यो ।
पछिल्लो डेढ वर्षमा उनले पटक–पटक यस्ता स्क्यान्डलको सामना गर्नुपरेको छ । एनटीभी प्लसमा उत्ताउलो लुगा लगाएर वक्षस्थल देखाएको भन्दै अन्तर्वार्ता रोकिएपछि उनी एकाएक चर्चामा आइन् । त्यसपछि गीत गाउँदा गाउँदै जापानमा दर्शकले हातपात गरेको र दुबईमा झडप भएको खबरले ज्योतिको छवि थप धुमिल्यायो । ‘ढाडे बिरालो...’ गीतको भिडियोसम्म आइपुग्दा उनलाई ‘गाएरभन्दा देखाएर’ हिट हुन खोजेको गम्भीर आरोप लाग्ने गरेको छ ।
यो भिडियोको बीचमा ज्योतिको एउटा संवाद सुन्न पाइन्छ, ‘कि रेखाको चल्छ कि देखाको ।’ यही संवादले नै उनको अंगप्रदर्शनको मोह पुष्टि हुने उनका आलोचकहरू दाबी गर्छन् । भलै उनी यसलाई आफ्नो लोकप्रियताको डाहा गर्नेहरूले बदनाम बनाउने चेष्टा गरेको बताउँछिन् । “गीत लेख्ने, गाउने, भिडियो बनाउनेलाई कसैले केही भनेका छैनन् । सबै मतिरै खनिएका छन्,” ज्योतिको दुखेसो छ, “अरू हुँदै नभएका स्क्यान्डल पनि मेरै बदनाम गर्न रचिएका हुन् ।” आलोचना र विवाद जति भए पनि सर्वस्वीकार्य यथार्थ के हो भने ज्योति रंग दुनियाँमा ‘हटकेक’ बनिरहेकी छन् । देश/विदेशमा आयोजना गरिने स्टेज सोमा उनको माग बढ्नुले यही पुष्टि हुन्छ । उनी नेपालमा हुने प्रति सो ५० हजार रुपियाँ लिन्छिन् भने विदेशमा घटीमा दुई लाख ।
ज्योतिले गाएका ‘उही मूलाका सिन्की...’, ‘जिम्माल बाकी कान्छी छोरी...’, ‘पिरतीमा दम छ...’ जस्ता गीत निकै हिट छन् । हरेक गीतले युट्युबमा कम्तीमा पाँच लाख भ्युअर्स पाएका छन् र हरेक गीतमा उनी आमलोकगायिका भन्दा भिन्न रूपमा प्रस्तुत भएकी छन् । छोटा लुगा र कामुक हाउभाउ उनको पहिचान बनिसकेको छ । नाच र पर्फम शैली हेर्दा पनि लोकगायिका कम, आइटम डान्स बढी लाग्छ । उनी आफैँ परम्परागत लोकगायन र गायिकाभन्दा भिन्न र समय सुहाउँदो भएको स्वीकार्छिन् । “लोकगायिका भन्दैमा म विमाकुमारी दुरा, विष्णु माझी, मुना थापामगर जस्तै हुनुपर्छ भन्ने होइन,” उनको तर्क छ, “मलाई जे सुहाउँछ वा गर्न मन लाग्छ, त्यही गर्छु । गाउने शैली र लुगा मेरै मर्जी अनुरूपका हुन्छन् ।” यस्तो बोल्ड स्वभाव बच्चैदेखि थियो रे उनीसँग ।
रोल्पा, नुवागाउँको गरिब परिवारमा जन्मिएकी हुन्, ज्योति । आठ कक्षासम्म रोल्पामै पढेपछि दाङ झरिन् । एसएलसी पास नगर्दै लोकगीत गाउन बुटवल, भैरहवा, धनगढीजस्ता सहर पुगिसकेकी थिइन् उनी । एसएलसीपछि परिवारलाई ढाँटेर काठमाडौँ आइन । भन्छिन्, “लोकगीतप्रति यति क्रेजी भइसकेकी थिएँ कि बसपार्कबाट सीधै दोहोरी साँझ पुगेँ ।” एक नातेदारबाट काठमाडौँ आएकै दिनबाट दोहोरी साँझमा गाउने मौका पाइन् । ज्याठास्थित सोल्टिनी दोहोरी साँझमा एक वर्ष गाइन् । त्यतिबेला उनी गुन्युचोली नै लगाएर गाउँथिन् तर अरू गायिकाजस्तो एक ठाउँमा बसेर होइन, नाच्दै–नाच्दै गाउँथिन् । स्वरसँगै गाउने शैलीका कारण उनको चर्चा बढ्दै थियो ।
त्यही बेला टुबोर्ग राष्ट्रिय दोहोरी गीत प्रतियोगितामा ज्योतिले भाग लिइन् । उनको टिम सेमिफाइनलबाट बाहिरियो तर उनले बेस्ट सिंगरको उपाधि जितिन् । दोहोरी साँझमा गाउन थालिन् । विगत सम्झिन्छिन्, “अनि, बिस्तारै मलाई दोहोरी साँझमा अल्झिनु हुँदैन भन्ने लाग्यो र एल्बम निकाल्ने धुनमा लागेँ ।”
उनले ‘मन किन टाढा भो...’ भन्ने गीतको रेकर्ड गराइन्, भिडियो बनाइन् तर म्युजिक कम्पनी बन्द भएपछि गर्भमै तुहियो । केही समयपछि अर्को गीत ‘मायासँग...’ सार्वजनिक त गरिन् तर चर्चा पाएन । रमाइलो के भने गीत हिट नहुँदा पनि उनी आधा दर्जन देश पुगिसकेकी थिइन् । उनका भनाइमा दर्शकसँग प्रत्यक्ष जोडिएर गाउने भएकाले व्यस्तता बढेको थियो । त्यसमाथि ०६८ सालमा ‘उही मूलाको सिन्की...’ गीत हिट भएपछि ज्योतिको व्यस्तता अझ बढ्यो । यही गीतको भिडियोमा ज्योति कामुक रूपमा प्रस्तुत भएकी छन् । सायद यही कामुकता देशविदेशमा उनको व्यस्तता बढाउन मेरुदण्ड बन्यो । विवाद पनि सफलतामा सहायक बनिरहेका छन् ।
ज्योति स्वीकार्छिन् कि, उनको सफलतामा गायकीको मात्र भूमिका छैन, हुलिया, हाउभाउ र नाच्दै गाउने शैलीले पनि माग बढाएको हो । त्यसैले केही अग्रजलाई मन परेन भन्दैमा शैली परिवर्तन गर्ने योजना छैन उनको । आफूले अग्रजलाई नभई श्रोता, दर्शकका लागि गाउने र उनीहरूले रुचाएकाले अग्रजले टाउको फुटाए पनि मतलब नराख्ने बताउँछिन् उनी । यहाँनिर ज्योतिको भनाइ बढी तर्कसंगत किन देखिन्छ भने अग्रज भनिएका पुरुष गायकले जिन्स पाइन्ट लगाएर लोकगीत गाउनु सामान्य भइसकेको छ । दौरा–सुरुवाल लगाएर स्टेजमा देखिने गायक अत्यन्त कम छन् । अनि, आफूले गुन्यूचोली छाडेर हाफ पाइन्ट लगाउँदाचाहिँ नानाथरी आरोप लगाउनु जायज नदेखिने उनको तर्क छ ।
सायद यस्तै–यस्तै कारणले होला, आलोचना बढे पनि ज्योति आफ्नो कामुक छविलाई निरन्तरता दिन कत्ति पनि डगमगाएकी छैनन् । सीधै भन्छिन्, “मेरो भिडियो, फोटो र स्टेज सो हेर्दा थुक निल्छन् तर पछाडि गाली गर्छन् । यस्तो ढाेंगी प्रवृत्तिले ग्रस्त छ, हाम्रो समाज । त्यसैले म मेरै मर्जी अनुसार गाउन र नाच्न पछि हट्दिनँ ।”
‘आफ्नो शरीर, आफ्नो मर्जी’ मार्काका आवाज उठिरहेका बेला ज्योतिका हुलिया र शैलीमा आलोचना गर्नु समय सुहाउँदो नहोला । र पनि, उनले गाएको एउटा दोहोरी गीतको पंक्ति यहाँ उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ । उक्त गीतमा गायक पशुपति शर्मा भाका हाल्छन् :
दोहोरी गाउने, नांगै हिँड्ने
यही ज्योति मगर होइन
नत्र गीतै नगाए
दोहोरी गाउने भए, लामो लुगा लगाए ।
आरोपका ४ शृंखला
उत्ताउलो लुगा लगाएर वक्षस्थल देखाएको भन्दै एक वर्षअगाडि एनटीभी प्लसद्वारा रेकर्ड भइसकेको अन्तर्वार्ता प्रसारणमा रोक ।
उनकै उत्ताउलो शैलीले दुबईमा दर्शकहरूबीच झडप भएपछि स्थानीय प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको हल्ला ।
बालाजुमा गीत सुटिङ गर्दा–गर्दै लोकगीतमा अश्लीलता भित्र्याएको भन्दै स्थानीय महिलाले पिटेको खबर ।
कामुक प्रस्तुति दिए पनि गीत गाउँदा गाउँदै जापानमा उनीमाथि दर्शकले दुव्र्यवहारको प्रयास गरेको हल्ला ।
तस्विरहरुः लक्ष्मीप्रसाद ङाखुसी
प्रकाशित: भाद्र १४, २०७२
« Reply #22 on: January 28, 2016, 05:52:25 AM »
« Reply #23 on: January 31, 2016, 01:27:44 PM »
« Reply #24 on: March 30, 2016, 12:18:20 PM »
« Reply #25 on: April 25, 2016, 03:35:31 PM »
« Reply #26 on: June 02, 2016, 07:47:57 AM »
« Reply #27 on: October 04, 2016, 10:35:48 AM »
कसैले सेक्सका लागि अफर गरे तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
के हुन्छ हेरौं । कतिको गुनी छ (हा..हा.. हा..) कतिको सम्भव छ । त्यस्तो सजिलो छैन । अनि तुरुन्त निर्णय लिन नसक्ने कुरा पनि त होइन । त्यति असम्भव पनि होइन । कतिबेला कुन मोड हुन्छ । त्यस्तो कुरा भन्नै सकिँदैन । समय, व्यक्ति अवस्था, आफ्नो मुड धेरै कुरामा डिपेन्ड हुन्छ । जुन दिन सबै कुरा मिल्छ त्यो दिन भइहाल्ला । तर, कुरा नमिले असम्भव छ ।
« Reply #28 on: January 19, 2017, 03:19:04 PM »
jyoti thapa magar . she deservesaseparate forum for her .
« Reply #29 on: April 26, 2017, 06:29:45 AM »
1723404_182640408757261_5919294192180629185_n.jpg (54.53 kB, 640x960 - viewed 183 times.)
12118720_158630851158217_4326980376901545083_n.jpg (30.18 kB, 480x480 - viewed 165 times.)